फेसबुकबाट पनि कमाउन सकिन्छ - रोजगारी - साप्ताहिक
यदि आफ्नो उत्पादन वा व्यापारबाट राम्रो नतिजा हासिल गर्ने हो भने छुट्टै फेसबुक पेज खोल्नुपर्छ र त्यसमार्फत आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक हिसाबले खोलिएको त्यस्तो एकाउन्टबाट विश्वसनीय र राम्रो सामग्री पोस्ट गर्ने क्रम सुरु. गर्नुपर्छ । यससँगै फेसबुकमा ‘लाइक’ पनि बढाउँदै लानुपर्छ । यो आफ्नो उत्पादनलाई भर्चुअल माध्यमबाट धेरै उपभोक्तामाझ लाने सरल उपाय हो । यसैमार्फत उपभोक्तासँग सोझो अन्तक्र्रियासमेत गर्न सकिन्छ ।
भौतिक माध्यम अपनाएर आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न निकै खर्च लाग्न सक्छ । यसका निम्ति छुट्टै बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर फेसबुकमा त्यस्तो समस्या छैन । यो माध्यमबाट नि:शुल्क रूपमै आफ्ना उत्पादनलाई उपभोक्तमाझ पुर्‍याउन सकिन्छ ।
नेटवर्किङ साइटमा आफूले पोस्ट गरेका सामग्रीको तुरुन्तै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रयोगकर्ताको भिजिट र कमेन्ट यसका प्रमाण हुन् । यसबाट आफ्नो विज्ञापन एवं उत्पादनलाई कतिले रुचाए भन्ने कुराको निक्र्याेल गर्न सकिन्छ ।
यसरी अनलाइन माध्यमबाट व्यक्तिगत विवरण तयार गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने सम्भावित रोजगारदातालाई के सन्देश दिन चाहेको हो ? आफ्नो सौख के हो, कस्तो करियर अँगाल्न चाहना छ ? यसका सम्बन्धमा संक्षिप्तमा आकर्षक ढंगले व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्छ । त्यसपछि कुनै वेबसाइट छनोट गरेर त्यसमा उक्त विवरण राख्नुपर्छ ।
फेसबुकमा हामीजस्ता लाखौं मानिस जोडिएका छन् । यसमा सूचना आदानप्रदान गर्नुका साथै आफ्नो जिज्ञासा मेट्न सकिन्छ । कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले छुट्टै फेसबुक पेज बनाएका छन् । फेसबुकमा कम्पनी वा बिजनेसको पेजबाट त्यससँग सम्बन्धित सूचना हासिल गर्न सकिन्छ । रचनात्मक प्रतिक्रिया र विचारका रूपमा यस्तो पेजमा कमेन्ट पोस्ट गर्न सकिन्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कमेन्टमा रोजगारी माग्ने वा याचना गर्ने किसिमको सामग्री भने पोस्ट गर्नु हँुदैन ।
फेसबुककै प्रयोग गरी ई–बुक्सबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ । धेरैजसो ई–बुक्स पैसा कमाउनकै लागि लेखिएको हुन्छ । यसका लागि आफूलाई मन पर्ने विषयमा ई–बुक लेख्न सकिन्छ । यसलाई पीडिएफ फम्र्याटमा रूपान्तरण गरेर प्रकाशित गर्न सकिन्छ । अमेजन डटकममा क्रिएटस्पेसमा सित्तैंमा ई–बुक प्रकाशित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि आफ्नो ई–बुकको लिंक फेसबुकमा अपलोड गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित :पुस ६, २०७३